Oromo News 04.14.21 | KWIT
Oromo News 04.14.21
By Fatiya Adam • Apr 14, 2021
Gorsa SDC fi FDA gorsa kennan irrati hundaa’e Ogeessoni fayyaa State Siouxland sadii keessati argaman hundaa talaali corona virus Johnson fi Johnson Vaccine fayyadamuu dhaabani jiru. Tarkaanfin kunis kan dhufe dubartiin jaha dhiigni isaani itituu erga qunnamee namni tokko eega due booda. Namnii tokkos Nebraska keessati argamee jira.
Governor Pete Ricketts akka jedheti ijoole baqqatoota kaahudhaf mootumman federala kan gaafate akka irrati dide himani Jirani. Itti gaafatamtooni republica united State keessati yeroo baaye ijoole maati ykn fira kaluutti irkachuuf wayta deemanatti ijoolen “sponsors” kan argattan kan jedhee Biden baase akka walii hin gallee himan.
Statement kunis kan dhufe erga guyyaa Gov. Kim Reynolds gabaasa walfakkaatu baste boodadha.
Deparmantiin polica Sioux City “show of force” hordofuudhaf seera jijjiirani jiran.
Gabaasni kaluu kana deparmanti nageenya Iowa ti kabahe akka mullisuti ogeessoni Iowa kan bara 2020 kan fayyadaman baaye dabaliinsa argamsiise jira. Wagga tokko keessati parsantii 83% jijjiirama mullisee jira.
Deparmantiin police Sioux City April 1st irraa jalqabee force incident akka laale toohatu taha. san dura, case dhan kan turee qofa gabaasani turan.2019, 68 shuufeeranno officer irraa siiqudha, 2020 keessa lakkiifsi kara 78 ol guddate jira.
Barsiifni Siouxland public Media akka gad dhiiseti, akka jijjiiramni kunuu dhufuuf kan qarqaare akka tae himani jiran.haa tau malee, poolisoota national standardidhaaf , community serive dhaff, transparency, fi accountability eegudhaf.